October 3, 2021 - Online Hartha
အိမ်ရှင်မများအတွက် သတင်းကောင်း ဆန်ပိုးမလာအောင်ကာကွယ်နည်းများ
October 3, 2021 by Online Hartha
ဆန်ပိုးဆိုတာ မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ရတဲ့ စာဖိုမှူးတွေ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေအတွက် ရန်သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဆန်ပိုးဟာ တော်တော်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက် ပေးပါတယ်။ သတိမထားလိုက်ပဲ ချက်လိုက်မိရင်လည်း ထမင်းက ပိုးနံ့ကြီးနံနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခုဆန်ပိုးတွေ မတက်အောင် ဆန်အိုးထဲထည့်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းပေးမှာဖြစ်ပြီးထိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်ကြရအောင်။ 1.ဂျင်းတက် များထည့်ထားခြင်း။ 2.အောင်မဲညိုပန်းထည့်ခြင်း။ 3.ထင်းရှူးဆီ ချောင်းလေးများထည့်ထားခြင်း။ 4.ငရုတ်သီးခြောက်ကြီးများထည့်ထားခြင်း။ 5.ဩဇာရွက်ခြောက်ထည့်ခြင်း။ 6.လောက်သေရွက်ထည့်ခြင်း။ 7.ကြက်သွန်နီထည့်ထားခြင်း။ အထူးသတိထားရမှာကတော့ ဆန်တွေကိုနေပူမလှန်းရပါ။ လှန်းပြီးရင်ပိုးတွေပြေးပေမယ့် ချက်ပီးသွားရင် ထမင်းတွေပျက်စီးနေတတ်ပါတယ်။ Credit Unicode Version ဆနျပိုးဆိုတာ မီးဖိုခြောငျထဲဝငျရတဲ့ စာဖိုမှူးတှေ အိမျထောငျရှငျမတှအေတှကျ ရနျသူတှထေဲကတဈယောကျပါ။ ဆနျပိုးဟာ တျောတျောကိုစိတျအနှောကျအယှကျ ပေးပါတယျ။ သတိမထားလိုကျပဲ ခကျြလိုကျမိရငျလညျး ထမငျးက ပိုးနံ့ကွီးနံနတေတျပွနျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ခုဆနျပိုးတှေ မတကျအောငျ ဆနျအိုးထဲထညျ့ပွီး ကွိုတငျကာကှယျတဲ့နညျးပေးမှာဖွဈပွီးထိုနညျးလမျးလေးတှနေဲ့တိုကျထုတျလိုကျကွရအောငျ။ 1.ဂငျြးတကျ မြားထညျ့ထားခွငျး။ 2.အောငျမဲညိုပနျးထညျ့ခွငျး။ 3.ထငျးရှူးဆီ … Read more
ကျွန်တော်တို့ သိပ်နောက်မကျခင် ငွေစ စစ်ကြည့်ကြရအောင်လား
တစ်သောင်း ဆယ်ခါဖြုန်းရင် တစ်သိန်းပါ တစ်သိန်း ဆယ်ခါဆို ၁၀သိန်းပါ… ကျွန်တော်တို့ အများကြီးဖြုန်းခဲ့ပြီးပါပြီ မလိုတာတွေဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်……မတန်တာတွေ စားခဲ့ဖူးတယ်….မတန်တာတွေ ဝယ်ဝတ်ခဲ့ဖူးတယ် မရှိရင်လည်း ချေးငှားပြီးပျော်ခဲ့ဖူးတယ်…သဒ္ဓါမပါဘဲ ကြွားဝါပြီးလှူခဲ့ကြဖူးတယ်…အားနာပြီး ကုန်ခဲ့ကြဖူးတယ် အချိန်တန်တော့..ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာမှအဖတ်တင်မကျန်ခဲ့ဘူး.. အသုံးနိုင်ဆုံးဆုလည်းမရခဲ့ဘူး…အစားနိုင်ဆုံး ဆုလည်းမရခဲ့ပါဘူး အဝတ်နိုင်ဆုံးဆိုပြီးလည်းကမ္ဘာမကျော် နိုင်ငံမကျော်ခဲ့ပါဘူး… သူ့နေရာနဲ့သူသုံးသင့်တဲ့နေရာသုံးမဖြုန်းသင့်တဲ့နေရာ မဖြုန်းဘဲ စနစ်တကျစုဆောင်းသွားတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူတွေကသာသူဌေးဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်သွားတာပါ…. ကျွန်တော်တို့ဖြုန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘာရလိုက်သလဲ ? ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိပ်နောက်မကျခင် ငွေစစုကြရအောင်လား….ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစုကြည့်ပါ… ကဲ….မိတ်ဆွေသင် ဖြုန်းမယ်ပြင်ထားတဲ့ငွေစက္ကူတွေကို အိတ်ထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါလား….? Credit Unicode Version တဈသောငျး ဆယျခါဖွုနျးရငျ တဈသိနျးပါ တဈသိနျး ဆယျခါဆို ၁ဝသိနျးပါ… ကြှနျတျောတို့ အမြားကွီးဖွုနျးခဲ့ပွီးပါပွီ မလိုတာတှဝေယျခဲ့ဖူးတယျ……မတနျတာတှေ စားခဲ့ဖူးတယျ….မတနျတာတှေ ဝယျဝတျခဲ့ဖူးတယျ မရှိရငျလညျး ခြေးငှားပွီးပြျောခဲ့ဖူးတယျ…သဒ်ဓါမပါဘဲ ကွှားဝါပွီးလှူခဲ့ကွဖူးတယျ…အားနာပွီး ကုနျခဲ့ကွဖူးတယျ အခြိနျတနျတော့..ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ ဘာမှအဖတျတငျမကနျြခဲ့ဘူး.. အသုံးနိုငျဆုံးဆုလညျးမရခဲ့ဘူး…အစားနိုငျဆုံး ဆုလညျးမရခဲ့ပါဘူး အဝတျနိုငျဆုံးဆိုပွီးလညျးကမ်ဘာမကြျော … Read more
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ လေယာဉ်ပေါ်က ခလုတ် ၄ခုနဲ့ အမျိုးသမီးအိမ်သာ
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ လေယာဉ်ပေါ်က ခလုတ် ၄ခုနဲ့ အမျိုးသမီးအိမ်သာ အဖြစ်က ဒီလိုဗျ … ကျနော် မလေးရှားကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းက အိမ်သာတက်ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ယောကျာ်းလေးအိမ်သာက လူပြည့်နေတာဗျ… ကျနော် မျက်နှာပျက်နေတာကို လေယာဉ်မယ်လေးက…တွေ့တော့ သနားပြီး အမျိုးသမီးအိမ်သာကို…အသုံးပြုခွင့် ပေးတယ်ဗျ… ”လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့် တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင် ရေလောင်းပြီးထွက်လာလိုက်ပါတခြားခလုတ်တွေကို ယောင်လို့မနှိပ်မိပါစေနဲ့ရှင်” ကျနော်လဲ အမျိုးသမီးအိမ်သာကဘာတွေ ကွာခြားလို့လဲ တွေးပြီး ဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခလုတ် ၄ခု တွေ့လိုက်တယ်ဗျာ။ “WW-WA-PP-ATR” တဲ့ ဒီခလုတ်လေးခုကဘာများလုပ်ဆောင်ပါလိမ့် ဆိုပြီးစဉ်းစားနေတာပေါ့။ အိမ်သာတက်ပြီးတော့ ကျနော် အဲ့ဒီခလုတ် ၄ ခုရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို စမ်းကြည့်အုံးမှဘာဆိုပြီး အရင်ဆုံး WWဆိုတဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကိုရေပူတွေနဲ့ ဆေးပေးနေတယ်ခမျ…။ အိုးးးး ဒိအဓိပ္ပါယ် warm water … Read more
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူတစ်ယောက် စာအိတ်တွေလိုက်ချနေတာမြင်လို့ ပြေးကောက်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ
ဆိုင်ကယ် တစ်စီးနဲ့ လူတစ်ယောက် စာအိတ်တွေ လိုက်ချနေတာ မြင်လို့ ပြေးကောက်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ… ဗန်းမော်မြို့က ထူးခြားဖြစ်စဉ် တစ်ခု မြေနုဈေးမှာ ဈေးရောင်းသူ ဝယ်သူ Mask တပ်မတပ် ကြည့်ရှု့စဉ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လူတစ်ယောက် စာအိတ်တွေ လိုက်ချနေတာ မြင်တော့ ဘာတိုင်သလည်းပေါ့ ပြေးကောက်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ Maskတစ်ခု ငွေ ၃၀၀၀ စာရွက်တစ်ရွက် စာဖတ်ပြီး အော်….တော်လိုက်တာ။ သာဓုပါဗျာ အမည်မဖော်ပဲ ကုသိုလ်လုပ်တာ အမြတ်ဆုံးပါ။ ဒါနဲ့ ဈေးရောင်းတဲ့ ဆင်းရဲပုံရှိတဲ့ သားအမိကို တဆင့်ပြန်ပြီး ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူလျှက် Kyaw Sweo Kyaw Swe Unicode Version ဆိုငျကယျ တဈစီးနဲ့ လူတဈယောကျ စာအိတျတှေ လိုကျခနြတော မွငျလို့ ပွေးကောကျပွီး … Read more